Owezempilo nokusiza abakhahlanyezwe ikhukhula – SIVUBELAINTUTHUKO
Owezempilo nokusiza abakhahlanyezwe ikhukhula
Ukudla nezindlu kunesidingo esikhulu kulabo abakhahlanyezwe yizikhukhula zakamuva kepha izinsiza zokwelapha nazo zibaluleke kakhulu.
Yingakho ushayelwe ihlombe umnikelo kaDkt Nondumiso Mzizana weSikelela Medical and Dental Suppliers (PTY) Ltd awukhiphele izisulu zezikhukhula.
Le nkampani inikele ngezinsiza zokwelapha zenani elingaphezulu kwesigidi esi-R1 (million), izingubo zokulala, Izifonyo, amagilavu,, ifenisha, amalaptop amabili, izi-R100 000, amanzi asemabhodleleni nokunye okuningi.
Amukela lo mnikelo egameni likaNdunankulu wesifundazwe uSihle Zikalala, uMphathiswa Wezempilo, uNomagugu Simelane, uthe: “Sifisa ukubonga kuDkt Mzizana nethimba lakhe ngokuphakamisa isandla basize esifundazweni esikhahlamezekile. Ukuthi bafake nezingubo zokulala nemisubelo kukhombisa ukuthi baziqonda kahle izidingo zabantu abangavikelekile besifundazwe sethu.”
UDkt Mzizana uthe ulijabulele ithuba lokunikela ukwenza ngcono impilo yabashaywe izikhukhula zakamuva.
Lo mnikelo uzokwabelwa nezikhungo zezempilo esifundazweni ukusiza iziguli.
TSEPO MOTLOKOA UMNYANGO wezeMpilo KwaZulu-Natal ophathiswe uNkz Nomagugu Simelane ugezeke igilo ngomkhankaso wawo IKHOSOMBA LAMAJITHA njengoba bewuhambele kumasipala waseMooi-River uyokhuluma nabesilisa ngezindlela zokuzinakekela ngakwezempilo. UNgqongqoshe wawo lo mnyango uNkz Simelane obehola ithimba lomnyango wakhe nezikhulu zikamasipala waseMooi-River nezezifunda saseMgungundlovu utshele abezindaba abebeyingxenye yokuhanjelwa kweKHOSOMBA LAMAJITHA ukuthi loluhlelo lwabo baqale ukulwethula kumasipala waseMhlathuze futhi bazimisele ukuhambela wonke […]
Sekuzoba nokuncima kukagesi